Top 3 misafidy ny handao an'i Dean Ambrose ho Tompondakan'ny kaontinanta iraisana - Wwe
Top 3 misafidy ny handao an'i Dean Ambrose ho Tompondakan'ny kaontinanta iraisana
Dean Ambrose amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo ombelahin-tongom-pankahalana indrindra amin'ny WWE. Izy no tompon-daka amin'ny WWE Intercontinental Champion ary nilalao ombelahin-tongony tsara hatrany hatramin'ny namadihany an'i Seth Rollins, rahalahiny taloha.
Efa nitazona ny Tompondakan'i WWE Intercontinental Championship indroa izy teo aloha, ary ny roa tamin'ny nanjakany ho mpitsara IC dia mendrika. Ny ady nifanaovany tamin'i Kevin Owens sy ny Miz ho an'ny Tompondaka Iraisam-pirenena dia voatanisa amin'ny sasany amin'ireo fifanolanana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny Intercontinental Championship.
Vao tsy ela akory izay dia resin'i Dean Ambrose i Seth Rollins mba hampitsahatra ny fiadiana ny tompondakan'i Seth tompondaka faharoa, ary i Ambrose dia nitana ny loka tamin'ny fahazoana tompondaka Intercontinental fanintelony tamin'ny asany WWE.
Ny fitazonana ny anaram-boninahitra IC farany an'i Dean Ambrose dia manjaka ao an-tsaina, tsy misy isalasalana fa ny fanjakan'i Ambrose fahatelo miaraka amin'ny titre IC dia hahafinaritra ny mijery azy.
Mipetraka izao ny fanontaniana lehibe, iza avy no handray ny lohateny avy any Ambrose rehefa tonga ny fotoana?
# 3. Tompondaka tamin'ny IC teo aloha Seth Rollins
Afaka mandresy an'i Dean Ambrose amin'ny lalao miverina ve i Seth Rollins?
heveriko fa tia ahy izy nefa matahotra
'The Architect' Seth Rollins no nilahatra voalohany tamin'ny tifitra tamin'ny Intercontinental Championship, satria mbola tsy niantso ny fe-potoana famerenany an'i Dean Ambrose i Rollins. Izy no mpitaingin-tsoavaly ho an'ny WWE tamin'ny taona 2018 ary nahazo ny amboara indroa tamin'ny taona 2018.
Aorian'ny fahaverezan'ny titre an'i Dean Ambrose ao amin'ny TLC 2018, dia misy ny fahafahan'ny tompon'andraikitra WWE hamerina an'i Seth Rollins ny lohateny amin'ny lalao miverina mba hanitarana ny fifandrafian'izy ireo mandra-pahatongan'ny Wrestlemania 35.
Mety misy ihany koa ny fahafahan'ny tompon'andraikitra WWE mamela an'i Seth Rollins handresy amin'ny lalao miverina, satria niely ny feo fa taorian'ny lalao voalohany nataony tao amin'ny TLC dia tsy faly tamin'ny fihetsika azon'ny ekipan'izy ireo i Vince McMahon.
Raha mitazona izany saina rehetra izany dia misy ny fahafaha-manao lehibe fa mety i Rollins no handroaka an'i Dean Ambrose.
hatsiaka vato vs shawn michaels
inona no mahasarika ny lehilahy amin'ny vehivavy
rehefa misy vehivavy mandao lehilahy tiany
aiza no handositra hanomboka fiainam-baovao